Baankiin Biyyoolessaa Itiyoopiyaa Maallaqa Baankii Dhaa Ba’uu Qabu Murteesse
Faayilii - Maamila Bankii mashinii ATM keessaa maallaqa baafattu
Baankiiin biyyoolessaa Itiyoophiyaa Caamsaa 11 bara 2012 qabeee qajeelfama maallaqa baankii dhaa baafamu murteessu har’aa qabee hojii irra kan oolchu ta’uu beeksise. Bulchaan baankii biyyoolessaa Dr. Yinaager Desee har’a isa kennaniin qajeelfamichi deddeebii maallaqaa seera qabsiisuu dhaan yakkaawwanii fi dilaala dhoksuu to’achuuf akkaa gargaara jedhan.
Qajeelfamni haaraan har’a hojii irra oole kun namni dhuunfaa guyyaatti qarShii kuma 200 fi ji’atti qarshii miliyoona tokko baankii dhaa baafachuun kan eeyamamu yoo ta’u kampaanileen immoo guyyaatti qarushii kuma 300 ji’atti immoo qarshii miliyoona 2.5 baafachuu dhanda’u jedha.
Maallaqa calla baafachuu irra jijjiirama utuu hin argamsiisin maallaqa murtaa’ee ol baafachuu kanneen barbaadan namoonni dhuunfaas ta’e dhaaboliin herregaa gara herregaatti ykn Cheekii ykn immoo CPO dhaan kafaltii gochuu danda’u jedhameera.
Qajeelfani kun baasii bifa addaan ilaalamu irratti adeemsa ofii isaa kan qabu yoo ta’u baasii haala addaa, baankilee fi prezidaantotaaf aangoo kennu isaaf murti kennanii baasiin sun yoo raawwatames torban torbaniin gabaasa baankii biyyoolessaaf godhaniin kan hordofamu ta’uun beekameera.
Baankiin qajeelfama kana irra daddarbe kaffaltii baase irraa adabi dhibba irraa harka 25 akka itti muramu illee ibsameera. Qajeelfamni kun baankilee mara, waaltaalee faayinaansii xixiqqoo keessattis hojii irra oola. Qajeelfama kana hojii irra oolchuuf qaamotii dhimmi ilaallatu mara waliin mariin geggeessamee walii galtee irra ga’amuun illee beekameera.